Khamiis, Dec 17, 2020-Jidadka muhiim u ah isku socodka gaadiidka dadweynaha ee magaalada Muqdisho oo xiran – LaacibOnline
Khamiis, Dec 17, 2020-Jidadka muhiim u ah isku socodka gaadiidka dadweynaha ee magaalada Muqdisho oo xiran
Khamiis, December, 17, 2020 (HOL) – Ciidamada nabad-galyada dowladda Soomaaliya ayaa xiray jidadka muhiimka u ah isku socodka gaadiidka dadweynaha ee magaalada Muqdisho sababo la xiriira cabsi laga qabo dibadbaxyo rabshado wata oo mar kale ka dhaca magaalada.
Jidadka muhiimka sida Waddada Maka-Al-mukarama, Wadooyinka soo gala degmooyinka Xamar Jajab iyo Waaberi iyo Wadada Isgoyska Jubba oo dhamaantood lagu arkayo ciidamo aad u heysan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in qorshuhu ahaa maanta in magaalada lagu qabto dibadbax taageero loogu muujinayo DFS, hasse ahaatee taa badalkeeda waxaa laga war helay qorshe kale oo ah in la qabanqaabinayo dibadbax looga soo horjeedo isla dowladda waana tan keentay in gabi ahaanba dibadbaxyadaasi la joojiyo.
Maalin ka hor ayeey aheyd markii qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho ka dhaceen dibadbaxyo rabashado watay iska horimaadyo dhaxmaray ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad hubeysan oo taageersanaa dibadbaxayaasha waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.
← The top 5 Canadian immigration stories of 2020
Khamiis, Dec 17, 2020-Daacish oo soo saartay muuqaal cusub oo ka hadlaya dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan Soomaaliya →
Axad, Dec 6 , 2020-Dowladda Soomaaliya’’ Waa in la kala diraa guddiga ka hortagga burcad baddeeda
Talaado, Sept 1 , 2020-Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo ugu dambayn tagay magaalada Muqdisho